I-Yoga vs. Pilates: Uyini Umehluko Futhi Yikuphi Okungifanele? - Impilo
I-Yoga vs. Pilates: Uyini Umehluko nokuthi Yikuphi Okungifanele?
Yoga Vs Pilates What S Difference Which One Is Right
Unentshisekelo ku-yoga noma kuma-Pilates? Uma ufuna ukuzivoxavoxa okusha okuzokushiya ujuluke futhi ugxile kokunye, lezi yizinto ezimbili esizithandayo umthelela ophansi ongakhetha kukho. Kodwa yini umehluko? Futhi iyiphi engifanele? Ngaphambi kokulwela ushintsho noma ukubhuka iseshini yakho elandelayo yeClassPass, nakhu konke odinga ukukwazi nge-yoga vs. Pilates.
UTom Werner / Getty Izithombe
I-Yoga isiyalo esineminyaka ecishe ibe ngu-5 000 esasivela eNdiya futhi sigxile kwifilosofi yasendulo yaseNdiya, uDani Schenone, a Umuntu Isazi sempilo ephelele nomqeqeshi weyoga oqinisekisiwe uyasitshela. Yize kuvame ukubizwa ngokuthi uhlobo lokuzivocavoca olududuzayo, i-yoga ingaphezulu kakhulu kokuzivocavoca umzimba. Kungumkhuba ongokomoya, ongokwengqondo nowomzimba ohlanganisa isethi yemithi eyisishiyagalombili (noma izitho) ezisisiza ukuba siphile impilo enenjongo, egculisayo nenolwazi, kuchaza uSchenone. Izitho eziyisishiyagalombili zihlanganisa konke futhi zibonisa ukusebenzisana phakathi kwengqondo, umzimba nomoya. U-Asana nguyena okungenzeka ukuthi uke wezwa ngaye kakhulu. I-Asana ingumkhuba we-yoga, izinja eziphansi, izinsana ezijabulayo, ukubukeka nokuma okuhle ozama ngakho konke okusemandleni ukubamba ngesikhathi sekilasi. Labo abenza i-yoga babheka umzimba njengethempeli lomoya ngakho-ke bayakwazisa ukunakekelwa okwenziwayo ekuyigcineni. Eminye imilenze eyisikhombisa, nokho, ibaluleke ngendlela efanayo futhi ingenye yemigomo esemqoka ehlukanisa i-yoga nokuvivinya umzimba okufanayo, njengePilates.
Ingabe kunezinhlobo ezahlukahlukene zeYoga?
Uma ubheka isheduli yeklasi lakho lendawo ye-yoga, uzobona izinketho eziningi ezahlukahlukene. Lawa akuwona amagama amnandi nje abafundisi abacabanga ngawo. Kunezinhlobo eziningi ezahlukahlukene izinhlobo ze-yoga ngaphandle lapho, kufaka phakathi iVinyasa, iKundalini neBikram, ukubala abambalwa. Ngokusho kweSchenone, konke ukuphindwaphindwa kweyoga kuvela emasikweni amabili wabazali: iVedic neSramana. Cabanga imicu yezintambo elenga kulawo masiko amabili, usho kanjalo. Lezo zintambo zifaka okuningi kwalokho esikwaziyo namuhla ngokuthi 'i-yoga yanamuhla'. Abanye kubalwa u-Ashtanga, Hatha noBaptiste. Kulawa mafomu wendabuko amaningi kuphume nezinye iziphikiso ezihlukile, kufaka phakathi i-yoga eshisayo, i-yoga yasemoyeni, i-hip-hop yoga kanye (yup, sizimisele) nge-yoga yezimbuzi. I-Yoga akuyona uhlobo lokuzivocavoca ngosayizi owodwa, kuchaza uShenone. Ukuthola umkhuba okusebenzelayo kungokwemvelo ngokuphelele futhi kusekelwe ezinhlosweni zakho, izidingo zakho, indlela ophila ngayo nobuntu bakho.
Ziyini Izinzuzo Ze-Yoga?
Akuyona imfihlo ukuthi ukuzijwayeza i-yoga kunezinzuzo eziningi zesikhashana nezesikhathi eside zezempilo, kufaka phakathi amandla ayo okukhulisa ikhwalithi yempilo, njengoba kutholakele lolu cwaningo luka-2011 by Ijenali Yomhlaba Wonke YeYoga . Ngokuya kweSchenone, ezinye izinzuzo zezempilo zifaka:
Izinzuzo Zesikhathi Esifushane:
Ithuthukisa ikhwalithi yokulala
Ithuthukisa ukusebenza kobuchopho
Izinzuzo Zesikhathi Eside:
Yehlisa amazinga e-cortisol (i-hormone eyintandokazi yomuntu wonke)
Kuphungula ubuhlungu bamalunga
Kwandisa ubukhulu bamathambo
Labo abajwayele ukwenza i-yoga bangalindela nokuthola ushintsho oluhle ekuqwashiseni ngomzimba. Ukuzijwayeza i-yoga kusivumela ukuthi sakhe ubudlelwano obungcono nemizimba yethu nezingqondo zethu, kukhulisa ukwamukelwa komzimba nokwazi okunengqondo, kuchaza uSchenone. I-Yoga isisiza ukuba siguquguquke kakhudlwana, yehlisa ubuhlungu obujwayelekile nezinhlungu futhi isivumele ukuthi sihambe ngokukhululeka ezimpilweni zethu zansuku zonke. Ukuhamba kuzuza eceleni, abanye bangaphikisana ngokuthi izinzuzo zengqondo ze-yoga zibaluleke kakhulu kunokwenyama. Ngokwengqondo, i-yoga isisiza ukuba sibe yizipho eziningi, sicabange kakhudlwana futhi sizamukele thina kanye nalabo abasizungezile. Ukuzibophezela ekwenzeni nsuku zonke kusisiza ukuthi sizethembe ngokwengeziwe, kukhulise ukuzimisela kwethu futhi kwehlise nezinhlelo zethu zezinzwa. Phakamisa isandla uma ucabanga ukuthi i-yoga kufanele ibe yimfuneko yokuphila?
OKUSHIWO: Ama-Yoga Ase-8 Asezingeni Elifanele Okubuyisela Ekunciphiseni Ukucindezeleka
Thomas Barwick / Getty Izithombe
Ngokufanayo ne-yoga, ama-Pilates ayindlela yokuzivocavoca enomthelela ophansi ehlose ukuthuthukisa ibhalansi yomuntu, amandla nokukhuthazela, Amanda Freeman usitshela, umsunguli kanye ne-CEO ye I-SLT , isitudiyo sokuzivocavoca esizinze e-NYC. Idalwe cishe eminyakeni eyikhulu eyedlule nguJoseph Hubertus Pilates, inhloso eyinhloko yamaPilates ukuxhasa ukulinganisela kwemisipha, amandla ayisisekelo nokuhleleka kwangemuva kokunyakaza okuncane, okuhamba kancane nokunemba. Futhi noma ungeke ugxume uzungeze noma uwise phansi nge-la Zumba, usengalindela ukucwaswa ngomjuluko phakathi nemizuzu eyishumi yokuqala yekilasi. Ungajwayeza ama-Pilates emethini noma emshinini okhethekile obizwa ngokuthi i-reformer, okuyipulatifomu eyisicaba, eslayishayo eneziphethu nama-pulleys ahlinzeka ngamazinga ahlukahlukene wokumelana. Kungabukeka njengedivayisi yokuhlushwa ezinsikeni (futhi kungazwakala njenge-pike eyodwa maphakathi) kepha i-reformer ingumshini owakhelwe ngokukhethekile ongaqeqesha izitho eziningi zomzimba ngasikhathi sinye ngesikhathi esisodwa ukhuthaza ukuguquguquka nokulinganisela.
Ingabe kunezinhlobo ezihlukile zama-Pilates?
Amaphilates aphinde ahunyushwa ngezindlela eziningi esebenzisa imishini ehlukahlukene, uFreeman usitshela, kufaka phakathi uguquko, usihlalo, umbhoshongo kanye nomata. Kukhona konke kusuka kumaPilate akudala, amaPower Pilates, amaMat Pilates futhi okuhle kunakho konke, ama-Pilates asezingeni eliphezulu akhule ngokuthandwa, kubandakanya ne-iteration yakhe, i-SLT, ehlanganisa iPilates ne-cardio emshinini obizwa nge-Megaformer. Ama-Classical Pilates ahlanzeke kakhulu, alandela uhlelo lokuqala futhi afaka womabili umsebenzi womsebenzi wokuguqula. Ekuqaleni yadalelwa ukusiza ukuvuselela amasosha ngesikhathi sempi kepha yasheshe yashintshwa ukuze kusizwe abadansi bakwazi ukuba bude futhi bancike. I-Contemporary Pilates inguqulo yesimanjemanje, ifaka ukuqonda okusha kwama-biomechanics nokuzivocavoca kwendabuko kwe-Pilates ukudala uhlelo oluphephile futhi olusebenzayo. Kukhona ithani lezinye izinketho ze-hybrid-Pilates laphaya futhi futhi, ngokufana ne-yoga, ukuthola ukuthi yini okungcono kakhulu kuwe kuncike ngokuphelele kuzinhloso zakho nasezintandokazi zakho.
Ziyini Izinzuzo Zama-Pilates?
Kunesizathu sokuthi o-celebs abanjengoKate Hudson, uCameron Diaz noNaomi baphambanise iCampbell practice Pilates ku-reg. Ama-Pilates ayaziwa ngemiphumela yawo emangalisayo, kusho uFreeman, leyo ncazelo yemisipha emide, emile futhi enethoni. Uma kwenziwe kahle, uzozizwa kusebenza ngokushesha. Ubuza kanjani? Ama-pilates asebenza imicu yemisipha ehamba kancane, eyaziwa nangokuthi imisipha yokukhuthazela, ebandakanyeka ekulawuleni kwangemva kokunyakaza nokunyakaza okuqhubekayo kunokunyakaza okuqhumayo, njengokuphambuka. Izinzuzo ezingeziwe zezempilo, ngokusho kwe- Isiteshi Sezempilo Esingcono , faka:
Kukhulisa amandla emisipha nethoni, ikakhulukazi emgodini
Ithuthukisa ukusebenzisana nokulinganisela
Ukuvuselelwa okusheshayo ngemuva kokulimala
Kwandisa umthamo wamaphaphu
Kukhulisa ukuzinza komgogodla
Kuthuthukisa ukuvimbela ukulimala
Ngakho-ke, Uyini umehluko phakathi kweYoga namaPilates?
I-Yoga ne-Pilates zivame ukuqoqwa njengezinhlobo ezifanayo zokuzivocavoca umzimba. Yize bobabili begxile ekuqwashiseni ngomzimba-womqondo, bagxile ekuphefumuleni, babhekwa njengomthelela ophansi futhi bangasiza ekuthuthukiseni ibhalansi namandla, ukufana kumisa lapho. I-Yoga ibeka phambili umoya ngaphambi kokunyakaza, kuchaza uSchenone, kanti amaPilates abeka phambili ukunyakaza, bese kuba umoya. Ngaphezu kwalokho, i-yoga igxila ekwandeni ukuguquguquka namandla emilenzeni, emgogodleni nasemalungeni, kuyilapho amaPilates egxila kuqala emandleni ayisisekelo, bese ekulinganiseni amaqembu emisipha yomzimba. Ngokufanayo, awusoze wamthola uguquko esitudiyo seyoga. Ama-pilates enziwa ngokwesiko kwimishini eyingqayizivele ngenkathi i-yoga yenziwa emethini, kusho uFreeman. USchenone uyanezela ukuthi, ngaphezu kwalokho, amaPilates amaningi ahamba alala phansi, kuyilapho iningi lezimo ze-yoga zenziwa zisukume.
Ekugcineni, izimiso zabo zokusungula kanye nezimpande eziyisisekelo futhi kulapho kusebenza khona okwehlukile. Umehluko omkhulu phakathi kwe-yoga nama-Pilates yingxenye engokomoya nengqondo, kusho uSchenone. I-Yoga ibeka phambili ukucabanga nokuxhumeka kokukamoya komuntu. Ama-pilates asekelwe kumkhuba wokuvuselela, amandla nokukhuthazela.
Uma ungakaze wenze noma yini (noma umusha ukusebenza ngokujwayelekile) ama-Pilates ne-yoga zombili izinketho ezinhle kubantu abafuna ukwengeza isiko lokuhamba nokunyakaza ezimpilweni zabo zansuku zonke. Uma usuvele usebenza kahle, ziyindlela enhle yokuthola amandla, ukugcina ukuguquguquka nokunciphisa ukucindezeleka.
OKUSHIWO: Nakhu Okudliwa Yi-Pilates Mogul Karen Lord ngoSuku Lokubuka (Nokuzizwa) Kuyamangalisa
Ama-Work-Gear Wethu Okufanelekile:
$ 59 Thenga Manje
Andi The ANDI Tote
$ 198 Thenga Manje
ASICS Abesifazane's UGel-Kayano 25
$ 120 Thenga Manje
I-Corkcicle Insured Insimbi Engagqwali
$ 35 Thenga Manje
#isenzo Sokulwa Nokuhlukunyezwa
Ama-Mini Uggs Sekuvele ukuthi Athambekele Kakhulu Ebusika — Futhi Sithole iDupe ngama- $ 60 nje
I-Movie Entsha engu- # 1 kuNetflix Isuselwa kuNoveli Yezothando Ethengisa Kakhulu
Umhlahlandlela Ocacile Wokufaka I-Mascara Emikhawulweni Yakho Ephansi
Imibono engu-13 Yokulondolozwa Kwesikhwama Semali, Ngokusho Komhleli Ochwepheshe
Okubalulekile Okuyi-11 Wonke Umnikazi Wezinja Omusha Okufanele Abe Nakho
Isitolo Esihle Kakhulu Sedonathi Kuwo Wonke Amazwe AseSifundazweni (Ngoba Bekufanele Sazi)
Izinto ezi-5 Odinga Ukuzazi Ngama-Vitamin Wokucwaninga Okucwaninga Ngokusobala Kwamasiko
I-Net Worth kaCarrie Underwood Iyinkulu, Ngenxa Yokuthengiswa Kwe-albhamu Neziphesheli Zamadola Ase-Million
Yonke Inhlobo yeMascara Wand, Kuchaziwe
Ukuqaphela The Best Brands ka-2021
Bamba Izinqe Zakho: I-'Jurassic World 2 'Iveza Isihloko Esisemthethweni kanye ne-First Poster
UMandy Moore Ube Nohambo (Lodumo) Lokukhumbula noShane West
igama lezitsha zesiShayina
izindlela zokupheka zokuzalwa zedina
okufanele ukwenze ukukhula kwezinwele
ama-movie endaba yothando
ukuzivocavoca okuhle kwamafutha esiswini alahlekile
U-Ashley Graham Uboniswe Ku-Bash Wangaphambi Komshado kaSophie Turner ku-All-White & nge-Thigh-High Slit
15 Ungadliwa-Mahhala Ungadliwa-Lungiselela Ungadliwa Ukwenza Kanye bese Yidla Isonto Lonke
UKate Middleton noPrince William bahlanganyele nje izithombe ezi-2 ezintsha sha zezingane— & uLouis Uyathola * Ubukhulu *
UJennifer Aniston Usanda kuqala ukukhishwa okusha sha 'Do on the Set of' The Morning Show '
Izitayela zezinwele ezi-5 ezisheshayo nezilula zaleyo mihlangano esemthethweni ebonakalayo